Shina orinasa mpamokatra vilany fandrahoan-tsakafo marobe | Meiling
Naoty voatsipika 220V 60Hz;
Lanja afa-karatsaka 2.45kg / PC
Famarana ny vokatra (L x W x H) amin'ny mm 256x1 66x173 (mm)
Accessories fingotra mainty, tady herinaratra (0.9m)
Fitaovana vilany alimina maty miaraka amina fonosana menaka tsy matevina
Asa fanendrena 30-720 min
1. 1.2L famolavolana kambana
Ny fahaiza-manao dia 1.20L maty-cast alimina miaraka amin'ny menaka mainty tsy miraikitra; Asa fanendrena (30-720 min); Sarom-baravarankely feno hafanana, miaraka amina tantana voapetaka; Satroka PP misy famehezana silika. Vatana lehibe misy takelaka fanafanana; lapoaly handrahoana, etona (akora Tritan).
2. Fomba fandrahoan-tsakafo enina
Ny lapoaly fanendasana herinaratra dia manohana nendasina, nendasina, vilany mafana, nandrahoina, nohosorana, nopotsehina. Takelaka elektrika multifunction iray no afaka fa tsy karazana lovia fandrahoana 6
3. Takelaka fanafanana haingana
Haingam-pandeha 60 segondra preheating mitovy thermally tsy misy setroka, tsy mila miandry ela. Fanavaozana ny rafitra fanamafisana mahatonga ny mari-pana milamina sy mitovy. Ary ny lapoaly fanendasana herinaratra dia hijanona tsy hanohy ny hafanana ary hihazona ny hafanana rehefa tonga any amin'ny setanao ny mari-pana, izay manampy anao mahandro sakafo tsara kokoa.
4. Ny lapoaly nonstick dia azo esorina
Ny lapam-bolongana elektrika miaraka amina fonosana azo antoka sy avo lenta ary azo ampiasaina amin'ny lafaoro, afo. Araka ny menio hanovana lovia samy hafa handrahoana sakafo isan-karazany tsara sy madio kokoa.
5. Volavola ergonomika
Bokotra fanaraha-maso hita maso. Mora kokoa ny misafidy ny asa fandrahoan-tsakafo araka ny itiavanao azy. Azo esorina ny boaty fisakafoanana atoandro azo entina. Rakotra fitaratra antonony miaraka amina tantanana, vatana lehibe misy takelaka fanafanana; lapoaly handrahoana, etona (akora Tritan).
Previous: Herinaratra Sakafo atoandro
Manaraka: Juicer azo entina